Dowladda Federalka Iyo Maamulka K/Galbeed oo Isku Mari La’ Xilliga Doorashada. (Warbixin) – Shabakadda Amiirnuur
Dowladda Federalka Iyo Maamulka K/Galbeed oo Isku Mari La’ Xilliga Doorashada. (Warbixin)
November 7, 2018 4:40 am by admin Views: 34
Kadib markii uu ay is casileen xubno ka tirsanaa guddiga doorashada, qaar kamid ah Odayaasha ku olloga ah Shariif Sakiin-na ay sheegeen ineysan dhici karin doorashada, ayay dowladda Federalku soo saartay hadal digniin ah oo arrintan ku saabsan.
War kasoo baxa wasaaradda Arrimaha gudaha ayaa waxaa lagu sheegay ineysan macquul ahayn in dib loo dhigo doorashada, Shariif Xassan-na uu sameeyo muddo kororsi.
Wasaaradda Arimaha Gudaha, Federaalka iyo Dib u Heshiisiinta iyadoo gudanaysa waajibaadkeeda dastuuriga ah waxay faraysaa madaxda Dowlad Goboleedka Koofur Galbeed ee Soomaaliya in doorashada dowlad goboleedka ay qabsoonto xilliggii loo asteeyey oo ah 17ka November 2018ka” ayaa lagu yiri warka kasoo baxay wasaaradda arrimaha gudaha.
Magaalada Baydhabo ayaa waxaa haatan ka jira xaalad cakiran oo dhanka siyaasadda iyo doorashada ku saleysan. Shariif Xassan oo garowsaday inuusan kusoo bixi karin doorashadan maadaama ay DF-ku wadato musharaxiin lacago badan lala garab taagan yahay ayaa ugu dambeyntii go’aansaday inuu fashilo qabsoomidda doorashada kadib markii uu qeyb kamid ah gudigii qaabilsanaa uu ku qanciyay iney is casilaan.
Xubnaha is casilay ee gudiga doorashada ayaa waxay ku doodeen in DF-ku soo fara galisay shaqadoodii, halka xubnaha aan is casilin ay ku adkeysanayaan iney doorashada dhacayso, cidda fara galinta wadaahina ay yihiin Shariif Xassan iyo saaxibadiis.
Odayaal dhaqameedyo aad ugu dhow Shariif Xassan oo saacadihii lasoo dhaafay shir jaraa’id ku qabtay magaalada Baydhabo ayaa sheegay iney dib u dhacday mudada doorashada sababo la xiriira jah wareer siyaasadeed, waxaana arrintan aan u daliishaneynaa bey yiraahdeen qodob aan kusoo aragnay dastuurka.
Shariif Xassan ayaa isagu ah nin aanan ka samri karin xilka uu hayo waayo, wuxuu ku qabaa dhaqaale badan iyo ganacsi sharci darro ah. Tusaale ahaan waxa uu qeyb ka yahay shirkad diyaaradeed oo isaga kala gooshta Muqdisho iyo Baydhabo taasoo maalin walba rakaab aad u badan kala gudbisa.
Maadaama Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ay wadada Muqdisho iyo Baydhabo ku beegsato shisheeyaha iyo dadka ku ollogga ah, bulshada Muslimkana ay u fasaxan yihiin ayaa waxa uu Shariif Xassan ka shaqeeyay in uu abuuro ciidamo iyo isbaarooyin badan oo dumarka lagu kufsado si gabi ahaanba wadada looga go’o diyaaraddiisana ay suuq u yeelato.
Sidoo kale wuxuu shir walba ka sheegaa in ay dhulka ka taliso Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab iyaguna ay hawada ka taliyaan. Inkastoo ay arrintaasi dab tahay ayaa waxaa haddana laga dheehanayay xayaysiis dadban oo uu shirkaddiisa u sameynayo.
Sidoo kale waxaa Shariif Xassan arrintan ku saacidayay xildhibaano uu kamid yahay Afaraale kaasoo baarlamaanka ka sheegay in ciidamada dowladda iyo kuwa K/galbeed ay dhigteen in ka badan 30 isbaaro laguna kufsaday bil kaliya 19 gabdhood.
Marka ay sidaasi dhacdo warbaahintana dadka looga sheego waxaa khasab noqonaya in bulshadu ka go’do jidka oo macaamiil la noqoto diyaaradda Shariif Xassan.
Isku soo wada duuboo, musharraxiinta ay wadato DF-ka oo iyaguna aanan ka yareysan Shariif Xassan marka loo eego dhiig miiradnimada iyo shisheeya jacaylka ayaa waxay dhankooda quud darreynayaan iney tubada surtaan iliha uu haatan ka qaraabto Shariif Xassan.